အကောင်းဆုံးကားအင်ဂျင်အင်ဂျင်နီယာ, အကောင်းဆုံးအင်ဂျင်ရေနံအမှတ်တံဆိပ် | 1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ကားအင်ဂျင်ဆီ
အင်ဂျင်ဆီအနိမ့်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း ထိုအရာ'သင်၏အအေးသည်အနိမ့်သည်ဆိုပါကများသောအားဖြင့်သတိထားမိသည်။ သင်၏အအေးခံသည့်အဆင့်သည်အဆင်ပြေလျှင်ထိုအရာသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်. အင်ဂျင်တွင်ရေနံအနည်းငယ်သာရှိပါကအအေးခံရန်အခွင့်အလမ်းမရှိသောကြောင့် ဆက်လက်. အပူဆက်လက်ဖြစ်ပွားလိမ့်မည်။
အင်ဂျင်သည်ရေနံမပါဘဲမည်မျှကြာမည်နည်း။ 15 မိနစ်ခန့်။ ဆီမပါဘဲအင်ဂျင်သည် 15 မိနစ်ခန့်အကျွမ်းတ0င်မီးခိုးများထဲသို့မ0င်ဘဲလည်ပတ်သည်။ သင့်လျော်သောချောဆီကိုချို့တဲ့သောအင်ဂျင်ရှိသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ပွတ်တိုက်ပြီးအချိန်မတန်မီ0တ်ဆင်နိုင်သည့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထိုးနှက်ထားကြသည်။